जागिरमा हिडेका नेपाली सेनाकाा जवानको लास बेवारिसे अवस्थामा भेटिएपछि – PathivaraOnline
Home > अपराध > जागिरमा हिडेका नेपाली सेनाकाा जवानको लास बेवारिसे अवस्थामा भेटिएपछि
जागिरमा हिडेका नेपाली सेनाकाा जवानको लास बेवारिसे अवस्थामा भेटिएपछि
admin February 12, 2019 अपराध	0
धरान । नेपाली सेनामा कार्यरत एक युवाको लास धरान–१८ स्थित बीपी प्रतिष्ठान पश्चिम गेट बाहिर फेला परेको छ । धरान–१७ घर भएका २४ बर्षीया कुमार परियारको लास बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी सुमनकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिए । हाल शव भएको स्थलमा प्रहरी पुगिसकेको छ ।डिएसपी तिम्सिनाका अनुसार हिजो मात्र जागिरमा भनेर उनी घरबाट हिडेका थिए । उनी धनकुटास्थित नेपाली सेनामा रहेको बताइएको छ ।
नेपाली सेनालाई पनि खवर गरिएकाले उनका बारेमा थप केही बेरमा खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ । घट्ना स्थल बीपी प्रतिष्ठानको आवास क्षेत्र पश्चिम र डिपोट स्कुल दक्षिणमा पर्छ । यहाँ ठूलो झाडी रहेको छ र खोल्सो पनि छ । उनको शव पनि त्यही खोल्सामा भेटिएको हो । घट्नाबारे प्रहरीले अनु्न्धान शुरु गरेको छ ।
उता इटहरीमा छुरा प्रहार गरी महिलाको हत्या भएको छ । इटहरी ४ स्थित माखिम टोलमा डेरा गरी बस्ने अन्दाजी बर्ष ३० कीसोनिया राईको सोही स्थान बस्ने लालबहादुर राईले साँझ ६ बजे छुरा प्रहार गरी हत्या गरेका हुन् । राई हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । मृतक महिलाकाे श्रीमान हाल बिदेशमा रहेको र मृतक दुवै जना लामो समयदेखि ‘लिभिङ टुगेदर’ मा रहेकाे खुल्न अाएकाे छ ।
सोनाक्षी सिन्हाको पानीमा बिकिनी लगाएको हट अबतारले यसरी धमाल मच्चाउदै (भिडियो)
भित्रै देखि बलिया हुन्छन् यी ३ राशि हुने व्यक्तिहरु ! मर्छन् तर हार मान्दैनन् !
बाख्रा चराउन गएकि १६ वर्षीय किशोरी ब’ला’त्कृत, रुँदै मिडिया यस्तो भनिन् (भिडियो सहित)
मेलम्चीबासीहरुलाई पीडा माथि थपियो अर्को पीडा, राहत वितरणमै झ’ड प (भिडियो हेर्नुस्)